Uto maka ndị na -enye data na ndị na -enye ndepụta na -ebute mmụba ESG zuru ụwa ọnụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Uto maka ndị na -enye data na ndị na -enye ndepụta na -ebute mmụba ESG zuru ụwa ọnụ
Ntinye ego ESG etoola n'ogo a na-enwetụbeghị ụdị ya n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-ebuli nnukwu ọchịchọ ọhụrụ maka data / nchịkọta ESG zuru ezu yana onyinye ntinye akwụkwọ ESG gbasaa ka ọ dabara n'ụdị ntinye ego ọhụrụ dị iche iche. Ma ndị na-enye data na ndị na-enye ndepụta na-etinye nkwanye ugwu na ngalaba ndị a ka ọ na-aga n'ihu na mgbanwe mgbanwe ESG na-agbanwe ngwa ngwa dịka nyocha ọhụrụ nke Burton-Taylor International Consulting bipụtara, akụkụ nke TP ICAP's Data & Analytics division, Parameta Solutions.
Sean Eskildsen, onye nyocha na Burton-Taylor kwuru, "Ndị na-enye ndepụta na-aza oku ndị na-etinye ego ka ha nwekwuo ohere itinye ego na ESG, ọkachasị ndị gbadoro ụkwụ na nsogbu ihu igwe, ebe a na-etinye nkwado n'ihu na nchegbu ọha." Ọ gbakwụnyere, "uto siri ike ga -aga n'ihu n'afọ ndị na -abịanụ, n'agbanyeghị na usoro nhazi na ọnọdụ ahịa dị iche iche ga -anwale mmetụta ndị ọchụnta ego na ngalaba,"
Adler Smith, onye nyocha na Burton-Taylor na-ekwu, "N'inwe mmasị na ọchụnta ego na-enweghị atụ na ọchịchọ ụlọ ọrụ, ndị na-enye data ego na-elekwasị anya na ịnye ngwaahịa na ozi nke na-enyere ndị sonyere n'ahịa aka ịtụle nrubeisi nke azụmahịa na-emetụta nchegbu gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe, na ọchịchị," na "Ọchịchọ a maka data / nyocha ESG sitere n'akụkụ niile nke ahịa isi obodo, mana etinyebere ya na akụkụ azụrụ ihe."
Burton-Taylor kwuputara mbipụta nke akụkọ ọhụrụ abụọ na-ekpuchi ma ndepụta ESG na ụlọ ọrụ data. Akuko ESG Index na-enyocha ego ha ga enweta n'ụwa niile site n'aka ndị na-eweta ya wee nye nghọta n'ime ndị ọkwọ ụgbọ ala nke uto ESG index. Akụkọ ESG Data/Analytics na -ele ọrụ na -abawanye ESG data/nyocha na -egwu na ahịa isi obodo yana otu ndị na -enye data si emeghachi omume na mgbanwe ahụ.